Cleaning Mazano - Ningbo BestCleaner Co., Ltd
BVC Cleaner rubatsiro muchichengeta munhu BBQ bato pasina kutya mabasa dzakachena.
Une mijenya shamwari uye tinoda kuziva kwavari, wadii kushamisa wavo nemitambo ine BBQ bato? Usarega imba yenyu sviba kuwana munzira vachinakidzwa nguva yako nedzimwe shamwari dzakanaka. Heino hurongwa 5 danho kukubatsira kuchenesa imba yako - hapana kushushikana, chete nyore kuzadzisa mabasa. Saka apo kutanga? Nokuti BBQ webato, vaenzi vachange kupedza nguva yavo kunze, saka inokosha nharaunda kuchenesa mumba vari pasuo, mumba, kicheni uye kuchimbuzi mupenyu. No vanofanira kuchenesa imba yose asi omerera webato nzira - vanhu vakawanda kufunga ichava pamabwendefa, echiShinto uye nzvimbo kuisa zvinwiwa zvavo.
Chinhu chokutanga vaeni enyu achaona ari mukova wako saka zviri zvinokosha kuita zvakanaka kuororwa. Itai kukurumidza kutsvaira panze, kutanga kubvisa chero tsvina. Uitewo nzira yako mukati uye kuita kutsvaira kumativi enyu pamusuo horo, kubvisa chero marara uye kuisa shangu, Mabhachi, heti uye tsamba kubva pameso. Guruva matafura kana decoration zvinhu uye mwaya zvimwe deodoriser.
Tanga nokutaura kunhonga chero panzvimbo zvinhu, kuswatura nepanhovo, pamakusheni, nezvifukidzo uye refolding runodzingira (kukuru kuvanza chero echitema - zvisinei musingadi kuita izvi mushure kushandisa chero BVC zvigadzirwa). Next kuchenesa tafura, TV chidzitiro nezvimwe huruva hukawanika nekushandisa microfiber jira. Pakupedzisira, Vacuum kumusoro chero guruva kana dzinovaraidza bvudzi pasi, uye usakanganwa kuchenesa renyu skirting mapuranga uchishandisa wako Vacuum kuti mumakwenzi kana hosipaipi kuda.
4.Clean ari Kitchen
First pfungwa kurwisa kutanga kubvisa singi renyu ndiro chero tsvina; . Kana uine dishwasher chete kuvapa sukurudza ndokuaunganidza muna Zvadaro kupa singi munhu rokutsvaira yakanaka - inofanira kuva isina ruvara, shimmering bheseni kana uri kuitwa - the BVC cleanerkuva achaitira basa iri nyore zvikuru! Next wachenesa yenyu pakaunda misoro, kurongedza kure zvisingakoshi midziyo uye uchapusika pakaunda pasi kicheni pfapfaidzo uye microfiber jira kana kuraswa ndokupisika. Unogona kuita zvakafanana kuti pachitofu chako, makabhati uye firiji. Angadai kuva akanaka pfungwa kuchenesa wako firiji mukati, rearranging kuti nzvimbo appetisers, kunwa uye zvimwe zvinhu zvakanaka. Pakupedzisira, chiutsi kukorobha pasi kuitira kicheni wako spick uye span.
5.Last asi kwete kupfuura chinhu yakachena ari Bathroom tsvene
Kusiya rinokosha nenzvimbo okupedzisira - yokugezera ndiyo nzvimbo unofanira kuisa zvakawanda uchifunga. Zvino izvi hazvirevi unofanira kuwana pasi maoko ako uye mabvi uye kusuka pasi, asi, kuchenesa zvinhu vaenzi vakawanda achashandisa sezvinoita chimbuzi, girazi, kunyura uye pakaunda. Tanga nokutaura kurongedza kure zvose rakarasika countertop zvinhu kupinda makabhati kana kwese pamberi, vakatevera nokupa singi, countertop uye nohwake munhu kuchenesa hwakaenzana zvose-chinangwa cleanerkuva kana BVC Cleaner. Next wachenesa chimbuzi yako - mukati, pachigaro, nomukombero uye kunze, uye nechokwadi iwe kutsiva kwenyu huripo chimbuzi mupumburu itsva chete. Wedzerai mamwe deodoriser kana zvemiti inonhuhwirira kenduru kuumba kuti Spa kunzwa. Uyewo musakanganwa kuisa itsva, zvitsva uye fluffy ruoko matauro panze. Pakupedzisira, mupe yokugezera pauriri yakanaka hwemvura mopu uye muri zvose zvaitwa.
Zviri nyore sezvo kuti yedu 5 nhano urongwa - musarega okuchenesa kuwana munzira yenyu webato prep nguva.